Samee Buug Khadka tooska ah ee loogu talagalay WordPress oo leh GravityView | Martech Zone
Haddii aad qayb ka ahayd beesheena in muddo ah, waad ogtahay sida aan u jecel nahay Foomamka Cuf-isjiidadka loogu talagalay dhismaha foomka iyo xog ururinta gudaha WordPress. Waa uun madal qurux badan. Dhawaan ayaan is dhex galiyay Foomamka cuf la Hubspot macmiil oo si qurux badan ayuu u shaqeeyaa.
Sababta ugu muhiimsan ee aan u door bido Foomamka Cuf-isjiidadka ayaa ah inay dhab ahaan keydineyso xogta gudaha. Dhammaan isku dhafka loogu talagalay Foomamka cuf ka dib wuxuu xogta u gudbin doonaa nidaamka dhinac saddexaad. Tani waa mid ku qasab ah macaamiishayda… Ma doonayo in xogta la waayo haddii qaybta saddexaad ee API hoos u dhacdo ama ay jirto nooc kale oo xaqiijin ah. Inta badan foomamka xiriirka ee fudud ee suuqa kaliya ma sameeyaan taas.
Intaa waxaa sii dheer, qalabyada sida ReCaptcha iyo Google Maps oo ka shaqeynaya sanduuqa, waa uun nidaam adag. Waxaan iibsaday liisanka bogga aan xadidneyn sanado ka hor waxaanan u isticmaali jiray si kasta oo xal macquul ah oo aad qiyaasi karto.
Sidee loo Soo Bandhigaa Xogta Foomamka Cuf-isjiidka?
Foomamka Cuf-isjiidadku waa aalad aad u qurux badan oo lagu keydiyo xogta what laakiin ka warran haddaad dhab ahaan rabto inaad ku muujiso xogtaas bartaada? Waxaan u soo saaray qaar ka mid ah xisaabiyaha khadka tooska ah ee macaamiisha waxaas sameeyay, mana ahayn hawl fudud. Waxaan kaloo soosaaray badeecad socodsiinta shaqada oo soo bandhigtay xog hoosaadka maamulka… waxay ahayd hawl qabasho.
Hagaag, ku soo dhawow Miisaanka! GravityView waa kumbuyuutar WordPress ah oo aad ka faa'iideysan karto si aad u daabacdo xogtaada Foomamka Cufnaanta. Waa wax cajiib ah - oo xitaa waxay heshay barakada Foomamka Cufnaanta oo ah xalka la doorbiday.
Dhisida tusaha khadka tooska ah ayaa fudud hada! Samee foom si aad u qabato macluumaadka, ka dibna u samee khariidado iyo liistada tusaha oo muujinaya xogta… adigoon qorin hal xariiq oo koodh ah!
GravityView waxay bixisaa awood lagu dhiso aragtiyo aan xadidneyn, ansixin iyo diidis gelinta kahor intaysan noolaan, waxayna awood u siineysaa tafatirka qoraaladaas dhamaadka-dhamaadka. Isku dar WordPress, Foomamka Cufnaanta, iyo Cufka Aragtida, oo waxaad leedahay nidaam maareyn kooban oo karti leh oo ururin kara oo soo bandhigi kara xogta sidaad doonto.
Xogta waxaa loo arki karaa sida liisaska, miisaska, miisaska xogta, ama xitaa khariidadaha.
Sidee ayuu u shaqeeyaa 'GravityView'?
Abuur foom - Marka hore, foom ku samee Foomamka Cufnaanta, foomamka ugu fiican ee loogu talagalay WordPress. Ku dar foomamka foomka oo ku dheji boggaaga.
Ururi xog - Kadib, buuxi foomka. Xogtaada ayaa lagu keydin doonaa dhamaadka gadaal boggaaga, gudaha plugin-ka Foomamka 'Gravity Forms'.
Naqshadeynta qaabkaaga - Abuur qaab-dhismeedkaaga qumman adoo adeegsanaya is-dhexgal jiid iyo dhibic ah. Xulo meelaha ay ku jiraan iyo meesha lagu soo bandhigayo. Koodh looma baahna!
Ku dar bartaada -
Ugu dambayntii, gundhig oo muuji xogtaada xagga hore ee websaydhkaaga. Waad eegi kartaa ama aad tafatiri kartaa qoraallada adigoon marin menu-ka WordPress.
Soo Degso Cuf-jiidashada
Afeef: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyeyaasha xiriirka la leh Foomamka cuf iyo Miisaanka ee maqaalkani.
Tags: affiliatexog ururimiiska xogtakhariidadaha googleFoomamka culayskaaragtida cuf isjiidashadahubspotbuugga internetkakhariidadaha wordpress